Kuphelile ukuqagela ngezinguquko zoKhozi - Ilanga News
Home Izindaba Kuphelile ukuqagela ngezinguquko zoKhozi
Kuphelile ukuqagela ngezinguquko zoKhozi
UMzokoloko Gumede noNjini bona sebengabadidiyeli
SANDILE MAKHOBA NOTHANDI ZONDI
APHELILE amaphupho nokuqagela ngezinguquko ebezilindelwe ngabomvu ezinhlelweni zoKhozi FM ezizoqala namhlanje ngoLwesine, ikakhulukazi kubasakazi.
Lingakashoni elayizolo ngoLwesithathu, kusabalale uhlu lwabasakazi balesi siteshi olumangalise abantu abaningi.
Izinguquko eziningi zihambe njengoba ILANGA langomhla ka-8-10 kuNdasa (March) lalibikile ngokuhletshelwa yimithombo yalo engaphakathi kulo msakazo.
Izinto zishintshile ezinhlelweni ezithathwa njengezinohlonze. Kulezi zinhlelo singabala oluthi, Isidlo Sasekuseni, (6:30 -9:00) obelushayelwa nguKhathide “Tshathugodo” Ngobe noNongcebo McKenzie oselunikwe uSipho “Sgqemeza” Mbatha ozobambisana noNonhlanhla “Mroza” Buthelezi obekuSisonke Drive (15h00-18h00) ngokubambisana noMzokhona “Mzokoloko” Gumede.
USgqemeza ubeshayela oluthi Sithakasela ISizwe (20h00-23h00) osekutshalwe kulo uNongcebo. KuJabul’Ujule (09h00-12h00) kubuyiselwe uDudu “Lady D” Khoza osehlale kulolu hlelo iminyaka engaphezu kwewu-27.
Kolwasemini u-12-2-3‚ kungene uBheka Mchunu (12h00-15h00), ogile izimanga ohlelweni abelwenza oluthi Ikhethelo loKhozi, okuvela ukuthi ulukhulise lwaze lwaba nabalaleli abawu-3.1 million.
KuSisonke Drive kujutshwe uSiya Mhlongo noSelbyonce Mkhize.
UZimiphi “Zimdollar” Biyela uzoqhubeka nohlelo lomculo wesintu, uSigiya Ngengoma olungena ngoMgqibelo ngo-9:00 kuya ku-12h00. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka odlule kwaba nomncintiswano wethalente owawubizwa ngeWinnie Mahlangu Female Presenter Search, lapho kwahamba phambili uZama Mseleku.
Le ntokazi izoshayela uhlelo lwasekuseni ngeSonto kusuka ngo-03:00-06:00 bese izintambo sezithathwa nguSbu Buthelezi ngo-09:00-12h00 ngohlelo oluthi, Indumiso obevele elusakaza kwasekuqaleni.
Okumangalise abaningi wukushuthekwa kukaTshatha ohlelweni lwasebusuku oluthi, Akulalwa, oluzongena ngo-00:00-03:00.
Yize kunjalo, uthotshwe inhliziyo ngeTop 20 esakazwa ngoMgqibelo. UMzokoloko ongomunye wabasakazi abahlonishwa kakhulu kulo mkhakha yena akabonwa nangokhalo noMandla “Njinji” Magwaza obeshayela iTop20.
Imithombo yeLANGA isipotshozele ukuthi bobabili laba sebezogxila ekudidiyeleni izinhlelo. USbongi Ngcobo oyi-business manager, uthe lo msakazo uzoqhubeka nokuhamba phambili ekusakazeni, futhi ukholwa wukuthi izinto zisazoqhubeka zihambe kahle nakulo nyaka, bakwazi ukuphakela abalaleli babo izinhlelo ezihlabahlosile besebenzisana nabo ngqo abalaleli.
UNkz Mmoni Seapelo oyibamba lomkhulumeli weSABC, uthe: “Njengengxenye yeqhinga leSABC lokuqinisekisa ukuthi lo msakazo uhamba phambili uma uqhathaniswa nezimbangi zawo, le nhlangano yenza izinguquko kubasakazi, okuyinto eyenzeka minyaka yonke.
“Uhlu olusha eziteshini zethu ngokwahlukana kwazo luzomenyezelwa uma seluphothuliwe.”
Previous articleUdumele ochithwe esethathiwe esikoleni ngenxa yeminyaka